आखिर को हुन त अध्यक्ष पदका उम्मेदवार दिनेश लामा ? - Radio Roshi
आखिर को हुन त अध्यक्ष पदका उम्मेदवार दिनेश लामा ?
in Roshi Khabar E-Paper, रोशी खबर, रोशी प्रोफाईल, समाचार
रोशी गाउँपालिका वडा नं १० मा स्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका दिनेश लामा यतिबेला चुनाबि मैदानमा उत्रिएका छन् । दिनेश लामाको जन्म वि. सं. २०३६ साल जेठ १७ गते महाभारत–४, बुढाखानीमा भएको थियो । कान्छामान योन्जन तामाङ र कान्छी माया तामाङका तेस्रो सन्तानको रुपमा जन्मिएका उनको परिवार हाल रोशी–१० मा स्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आईरहेका छन । आफू जन्मिएको स्थानमा विद्यालय नहुँदा दिनेशशले निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । सुरुवाती ६ महिना अनौपचारिक अध्ययन गरेका उनको औपचारिक शिक्षा गाम्रोन्नती प्रावि बाट भएको थियो । त्यहाँ कक्षा १ मा अध्ययन गरेपनि कक्षा २ मा पढ्न उनी विन्धवासिनी प्रावि मंगलटार पुगेका थिए । जन्म थलो बुढाखानीमै विद्यालय स्थापना भएपछि कक्षा ३ मा पढ्न गाउँकै भुमेश्वरी प्राविमा भर्ना भए पनि कक्षा ४ पढ्नको लागि गाउँमा विद्यालय थिएन । सन्तानको शिक्षाकै लागि उनको परिवार वाल्टिङ मा बसाई सरेको थियो । एसएलसी सम्मको अध्ययन उनले स्थानीय पञ्चकन्या माविमा गरे । कक्षामा सधै प्रथम हुने दिनेश २०५४ सालमा एसएलसी दोस्रो श्रेणीमा उत्र्तीण भएका थिए ।
महेन्द्र रत्न क्याम्पस ताहाचलबाट आइ.एड उत्तीणर् उनले ताहाचालबाटै अंग्रेजी विषय लिएर वि.एड अध्ययन गरेका थिए । लामा २०६६ सालमा त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर फस्ट डिभिजनमा पास भएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमै एम. फिल गरे । अहिले लामा त्रिविमै पिएचडी अध्ययन गरिरहेका छन् । विद्यार्थी जीवनदेखि नै लामाले विद्यार्थी राजनीति शुरु गरेका थिए । २०६२÷६२ को आन्दोलनका बेला सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका दिनेशले त्यस समय ७२ घण्टासम्म प्रहरी प्रशिक्षण महाराजगन्जमा बन्दी जीवन विताउन बाध्य भएका थिए । पत्रकारीतामा पनि सक्रिय उनी प्रतिगमन विरुद्ध पटक–पटक अनसनमा बसेका छन् । रत्नराज्य क्याम्पसमा समाजशास्त्र विषयमा प्राध्यापन गराउदै आएका उनी भाषिक, जातीय उत्पीडनको विरुद्धमा आवाज उठाउने मध्येका एक सशक्त पात्र हुन् ।
राजनीतिलाई सम्मानित र समाजसेवाको उत्कृष्ट नमूना हो भनि प्रमाणित गर्न लामा राजनीतिमा निरन्तर कृयाशिल रहदै आएका छन । विद्यावारिधी (पिएचडी) सम्म अध्ययनरत लामा रोशी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने योजनासहित स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेका छन् । नेपाली कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा शिवप्रसाद हुमागाई नेतृत्वको जिल्ला कार्यसमितिमा सदस्य निर्वाचित भएपछि जिल्ला प्रशिक्षण शाखा प्रमुखको रुपमा उनले धेरै स्थानमा पार्टीका प्रशिक्षण समेत चलाएका छन् । १३ औं महाधिवशेनमा मधु आचार्य नेतृत्वको जिल्ला कार्यसमितिमा सचिव निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेसको १४ औ महाधिवेशनमा उनी काभ्रे प्रतिनिधिसभा क्षेत्र १ को सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । हाल गैरसरकारी संस्था नाङ्गसाल एसोसिएसनको अध्यक्ष रहेका उनले संस्थामार्फत शिक्षण सिकाई कृयाकलाप, बालबालिका, स्वास्थ्य, भूकम्पपछिको पुननिर्माणको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छन ।
योजना निर्माण, कार्यान्वयन, दातृ निकायको समन्वय साझेदारीमा विशेष क्षमता र दख्खल राख्ने दिनेश स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने उपयुक्त पात्र हुन् । राम्रो पब्लिक रिलेसन भएका उनी स्थानीय तहलाई प्रदेश र संघ सरकारसंग जोड्ने दरबिलो पुलका रुपमा देखा परेका छन् ।
मतदान केन्द्रमै कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने सरकारको तयारी
सयौं नेता,कार्यकर्ता र जनताको साथमा रोशीमा गठबन्धनको संयुक्त चुनावी अभियान जारि
नमोबुद्द–३ को वडा अध्यक्षमा कांग्रेसबाट रमेश तिवारीे बिजयी
बेथानचोकको ढुंखर्कमामा अझै सुरु भएन स्थगित भएको मत गणना
जेष्ठ १, २०७९
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पुन वृद्धी
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पुन बृद्धी
नमोबुद्धमा १ मा स्वतन्त्र बाट वडा अध्यक्षमा प्रेम बहादुर तामाङ विजयी
नमोबुद्द–३ को वडा अध्यक्षमा कांग्रेसबाट रमेश तिवारीे बिजयी जेष्ठ २, २०७९
बेथानचोकको ढुंखर्कमामा अझै सुरु भएन स्थगित भएको मत गणना जेष्ठ १, २०७९
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पुन वृद्धी जेष्ठ १, २०७९
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पुन बृद्धी जेष्ठ १, २०७९
नमोबुद्धमा १ मा स्वतन्त्र बाट वडा अध्यक्षमा प्रेम बहादुर तामाङ विजयी जेष्ठ १, २०७९